Xinhua Myanmar - တရုတ်နိုင်ငံ ပေကျင်းမြို့ တာ့ရှင်းခရိုင်တွင် ကွာရင်းတင်းဝင်နေသူများကို အစားအစာနှင့် နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်များ ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိ
တရုတ်နိုင်ငံ ပေကျင်းမြို့ တာ့ရှင်းခရိုင်တွင် နေ့စဉ်သုံးအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများကို ဝန်ထမ်းများက အမျိုးအစားခွဲခြား၍ ကားပေါ်သို့တင်နေသည်ကို တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ) Social, Education & Health
တရုတ်နိုင်ငံ ပေကျင်းမြို့ တာ့ရှင်းခရိုင်အတွင်းရှိ ဒေသခံများအားလုံးကို မြို့တော်မှ ထွက်ခွာခြင်းမပြုရန် ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက်က တားမြစ်လိုက်သော ကြေညာချက်တစ်ခုထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မြို့အပြင်ဘက်သို့ သွားရောက်လိုသူများအနေဖြင့် ဒေသခံအာဏာပိုင်များထံမှ ခွင့်ပြုချက် ရယူရမည်ဖြစ်ပြီး ခရီးမသွားမီ သုံးရက်အတွင်း COVID-19 မရှိကြောင်း nucleic acid စစ်ဆေးမှုရလဒ် ပါရှိရမည်ဖြစ်ကြောင်း တာ့ရှင်းခရိုင် ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ် ထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ဦးဆောင်အုပ်စုထံမှ သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ ပေကျင်းမြို့ တာ့ရှင်းခရိုင်တွင် နေ့စဉ်သုံးအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများကို ပို့ဆောင်ပေးနေသည့် ဝန်ထမ်းတစ်ဦးကို တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
အဆိုပါ ခရိုင်က ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအသစ်တွေ့ရှိခဲ့သော ထျန်းကုန်းယွန့်ခရိုင်ခွဲရှိ လူနေအိမ်ရာ ငါးခုတွင် တင်းကြပ်သော အသွားအလာကန့်သတ်ရေး စီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ယခုအခါ ယင်းအိမ်ရာများရှိ နေထိုင်သူ ၂၄,၀၀၀ ကျော်သည် ၎င်းတို့၏ နေအိမ်၌ပင် တစ်ကိုယ်ရေ ကွာရန်တင်းနေထိုင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ ပေကျင်းမြို့ တာ့ရှင်းခရိုင်တွင် နေ့စဉ်သုံးအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများကို ဝန်ထမ်းများက အမျိုးအစားခွဲခြား၍ ကားပေါ်သို့တင်နေသည်ကို တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ ပေကျင်းမြို့ တာ့ရှင်းခရိုင်တွင် ကုန်ပစ္စည်းများကို အမျိုးအစားခွဲနေသည့် ဝန်ထမ်းများကို တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ ပေကျင်းမြို့ တာ့ရှင်းခရိုင်တွင် နေ့စဉ်သုံးအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ ရရှိရန် စောင့်ဆိုင်းနေသူများကို တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ ပေကျင်းမြို့ တာ့ရှင်းခရိုင်တွင် ကုန်ပစ္စည်းများ ပို့ဆောင်ပေးနေသူတစ်ဦးကို တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ ပေကျင်းမြို့ တာ့ရှင်းခရိုင်ရှိ ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများထားရှိရာနေရာကို တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ ပေကျင်းမြို့ တာ့ရှင်းခရိုင်တွင် ဖြန့်ဖြူးပေးမည့်ကုန်ပစ္စည်းများကို ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းနေစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ ပေကျင်းမြို့ တာ့ရှင်းခရိုင်တွင် တစ်ကိုယ်ရေအကာအကွယ်ဝတ်စုံ ဝတ်ဆင်ထားသော ဝန်ထမ်းတစ်ဦးအား အထောက်အကူပစ္စည်းများကို တွန်းလှည်းဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးနေစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ပေကျင်းမြို့တော်ရှိ ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်များက တာ့ရှင်းခရိုင်တွင် မကြာသေးမီက တွေ့ရှိခဲ့သော COVID-19 ဖြစ်ပွားမှုများနောက်တွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံ၌ ပထမဆုံးတွေ့ရှိခဲ့သော ဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်သည်ကို ခွဲခြားသိရှိခဲ့ကြောင်း ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက်က ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
BEIJING, Jan. 21 (Xinhua) -- Beijing's Daxing District issuedanotification on Wednesday banning all people in the district from leaving the capital.
1- Staff sort out daily supplies and load them inacar in Daxing District of Beijing, capital of China, Jan. 20, 2021.(Xinhua/Peng Ziyang)
2- A staff member delivers daily supplies in Daxing District of Beijing, capital of China, Jan. 20, 2021.(Xinhua/Peng Ziyang)
3- Staff sort out daily supplies and load them inacar in Daxing District of Beijing, capital of China, Jan. 20, 2021.(Xinhua/Peng Ziyang)
4- Staff sort goods in Daxing District of Beijing, capital of China, Jan. 20, 2021.(Xinhua/Peng Ziyang)
5- People wait in line to get their daily supplies in Daxing District of Beijing, capital of China, Jan. 20, 2021.(Xinhua/Peng Ziyang)
6- A delivery man delivers goods in Daxing District of Beijing, capital of China, Jan. 20, 2021.(Xinhua/Peng Ziyang)
7- Photo taken on Jan. 20, 2021 showsasupply area in Daxing District of Beijing, capital of China.(Xinhua/Peng Ziyang)
8- A staff member sterilizes the goods to be delivered in Daxing District of Beijing, capital of China, Jan. 20, 2021.(Xinhua/Peng Ziyang)
9- A staff member inaprotective suit transports supplies withacart in Daxing District of Beijing, capital of China, Jan. 20, 2021.(Xinhua)
Previous Article တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ်ရှိ စီးလျန် အဝေးပြေးလမ်းမကြီး၏ မြင်ကွင်းများ
Next Article တရုတ်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ဒေသ စစ်ဆောင်ပန်နားတွင် အဝေးပြေးလမ်းမသစ်တစ်ခု ထပ်တိုးဖွင့်လှစ်